Kwimeko iplanethi u-romeo, uyakwazi kuhlangana entsha abahlobo ukufumana kuwe Imihla, Dating kwaye nkqu uthando. Noko ke, asinguye wonke ubani ukukhangela kunye inkangeleko Efanayo njengoko kufuneka. Ke ngoko, sicebisa ukuba ngaba kusoloko kufuneka ulumkele kwaye sebenzisa yakho ngokufanayo evakalayo, ukuba ukhe ubene Dating okanye nabanye abantu-intanethi kwi-touch kuma. Ukususela asikholwa ufuna ukucwangcisa ngokwethu phezulu njengoko lwabagwebi yakho virtuousness, asisayi zibalisa zethu Romeos, njengoko baya kuba ukuba baphile. Kodwa siza kukunika Dating iincam kwaye kuluncedo ulwazi, ngoko ke ukuba ufuna kuba ngokwakho unako isigqibo. Hamba kakuhle kunye buqu ukuba bathe, macala omabini iincoko ngokunjalo kwi-inkangeleko yakho. Ezinye izinto zange weva kwi-wonke elinolwazi, umzekelo, idilesi, inombolo amanani, i-akhawunti data, okanye iifoto ezisemthethweni amaxwebhu. Mali inkcazelo yobuqu zange share personal-mali iinkcukacha okanye ikhadi amanani nge-Intanethi Acquaintances. Ukukhutshelwa kwemali okanye thumela ikhadi lebhanki letyala iinkcukacha ukuba abantu kuwe kuphela kuhlangatyezwana nazo kwi-intanethi okanye awuyazi kakuhle kakhulu. Ukukhusela yakho log-in ulwazi (ukufikelela data) Nika nabani na i-password yakho. Ukuqinisekisa ukuba zonke ufikelelo lwakho data uza ukuvutha iisepha zokucoca. Ufikelelo lwakho data ufumana ulwazi lwe-Akhawunti yakho. Oku neqabane lakho iplanethi u-romeo inkangeleko enxulumene idilesi ye-Imeyile kwaye i-password yakho. Kufuneka oku kuba ezithile izicelo, umzekelo, ukuba ngaba i-password yakho, okanye wakho idilesi ye-Imeyile ufuna ukutshintsha. Inkangeleko yakho indawo kanjalo, ukuba sonke ufuna ukwazi njani vala abanye Abasebenzisi ngabo, kubalulekile akusoloko okulungileyo ukunika yakho yokwenene indawo ibonakale esidlangalaleni ebonakalayo yakho yempangelo, umzekelo, okanye iindawo apho kubalulekile punishable okanye ezingekho mthethweni kuba gay kuzo iindawo apho kubalulekile kuthelekiswa Gay-intolerant okanye, ngakumbi ngokubanzi, apho uziva uncomfortable. Ke ngoko, uyakwazi malunga nokuba ngaba ufuna indawo yakho nge GPS okanye indawo kwenye indawo enye into. Ukuba ubona olandelayo ukuba indawo okanye umgama we Umsebenzisi, encinane ikhampasi needle njengoko GPS icon, oko kuthetha ukuba uya communicates yakhe GPS indawo. Njengawuphi na enkulu Dating site, kuphela abantu abaphila okulungileyo intentions hayi umqondiso kunye nathi. Yiyo sicela ukuba gcinani amehlo enu vula kwaye hayi kukholelwa yonke into. Kukho kwi-inkangeleko, kuphela imifanekiso a porn actor. Uyakwazi kubakho iintlobo data emva kokuba kwi porn site ebhalisiweyo. Olukhulu umntu ukusuka kwesinye isiphelo sehlabathi ungathanda ukuba kukutyelela ngqo kwaye get watshata. Yaye ngaba kuba millionaire kwi-Iplanethi u-romeo-lottery. Ukuba into ikhangeleka kakhulu okulungileyo ukuba abe yinyaniso, ngoko ke, mhlawumbi. Siza kusebenzisa oluntu kwaye artificial iingqiqo (ukutsho oko, i-Software) ukususa enjalo ngolunya Profiles yonke imihla. Kufuneka nangona kunjalo suspicious Zabucala okanye imiyalezo ukuza kuwo, nje nqakraza kwi-Spam – Umsebenzisi-ingxelo-Ikhonkco. Musa worry: kwinkqubo yethu kukuba sophisticated, ezingachanekanga umyalezo clears? hayi u-romeo. Kodwa ngakumbi iingxelo sifumana, ngokukhawuleza sinako ukuphendula. Ibe ohlukeneyo collides nani, annoying, okanye mhlawumbi akunyanzelekanga i-ndinovelwano ukuba into engalunganga. Ukuba kunjalo, nceda qaphela: ulumkele ukuba abe soloko kancinci careful, ingakumbi kunye entsha zabucala. Kuqwalasela inkangeleko isimo (eboniswa kwi-ngamnye inkangeleko). Thintela ungafumana kuye Ukuba Umsebenzisi Intrusive okanye uncomfortable, uyakwazi block kuye. Ngaphezulu kule wethu FAQ buza imibuzo, musa hesitate ukuba buza kunokwenzeka Umhla imibuzo. Enizaziyo uyakwazi kuphela yenza xa usenza izinto ezifanelekileyo. Ngoko ke, yintoni umbuzo ufuna ukwazi. Ukuba unayo nayiphi na yethutyana, ukwenza ukuba kuyimfuneko precautions. Kunjalo, kubalulekile ngokugqibeleleyo kakuhle ngokunxulumene ne SANDULELA ngculaza Isimo okanye sexually ezisasaziweyo izifo. Kodwa ukumbule ukuba useza anamashumi ipesenti ngokuqinisekileyo. Umntu okokuqala intlanganiso rhoqo exciting. Yena ngenene ingaba zinokuphathwa guy nisolko chatting adored.
Kodwa nceda ugcine zinto zilandelayo engqondweni: Yintoni wena ngokwenza okanye hayi xa esenza oko iza Ngesondo, ingaba eyakho personal isigqibo. Kodwa ukuhlala kunye isigqibo sakho, nkqu ukuba ukhe ubene kwi-ubushushu mzuzu kwezinye enticing.
Kubalulekile impilo yakho
Kubalulekile ubomi bakho. Akukho namnye unako isiqinisekiso ukuba yakho Umhla ayina sexually ezisasaziweyo izifo. Emva Umhla, mhlawumbi kuba bonke ihlela ka-memories kwaye izimvo malunga yokugqibela ebusuku apha kum entloko.
Ukuba uva awuqinisekanga, zibuze
← Dating ngaphandle ubhaliso
Dating abakhoyo phezu →